मंगल ग्रहले गर्दैछ आफ्नो घर परिवर्तन : तपाईंको राशीमा प्रभाव हेर्नुहोस । | Everest Online News
Reporter: Everest Online News Jyotish sastra, Kathmandu, Mangal graha
काठमाडौं १३ असार
आज मध्य राती अर्थात् २७ जुन २०१८ राती २ बजेर ३५ मिनेटमा मंगल ग्रहले सबै राशिमा प्रवेश गर्नेछ । ज्योतिष का अनुसार मंगल ग्रहको यो प्रवेश सबै राशिका लागि ठूलो परिवर्तन ल्याउने कुरामा विश्वास गर्छन् ।तपाइँ पनि हेर्नुहोस तपाईंको राशिमा मंगल ग्रहको प्रभाव के छ ?
मेष: स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखापर्न सक्छ ।
मंगल तपाईंको राशिको चिन्हको १० औं भागमा प्रवेश गर्दैछ र केतु पहिले नै उपस्थित छ । यस समयमा तपाईंको जीवनमा संघर्ष बढ्न सक्छ । परिवारमा भ्रम र स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। सावधान हुनुहोला !
वृष: कुनै पनि क्षेत्रमा पैसा लगानी नगर्नुहोस् !
मंगल तपाईंको राशिबाट नवौं स्थानमा प्रवेश गर्दैछ। यो स्थानलाई तपाईंको भाग्य स्थान मानिन्छ। तपाईंले यस परिवर्तन पछि बाधाहरू को सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। यस समयमा पैसा लगानी नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । यस समयमा तपाईले तपाईको कामको लागि अतिरिक्त मेहनत गर्नु पर्दछ।
मिथुन: स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोस् ‌।
मंगल तपाईंको राशि मार्फत आठौं स्थानमा प्रवेश गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा, तपाईंको स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखापर्न सक्छ । यस समयमा तपाईंको शत्रुहरूले पनि तपाईंलाई हानि गर्न सक्छन्। पारिवारिक जीवनमा तनावको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । सवारी साधनमा यात्रा गर्दा सावधान रहनुहोला ।
कर्कट: कडा मेहनत र धैर्यताको साथ काम गर्नु होला।
तपाईंको राशिको सातौं घरमा मंगोलको प्रवेश हुनेछ। मंगल ले तपाईंको लागि मिश्रित परिणाम ल्याएर आएको छ। यदि तपाईंले कुनै पनि कार्य हस्तक्षेप हुनु पुर्व सम्पन्न गर्न सक्नु भयो भने राम्रो हुन्छ । कडा परिश्रम र धैर्यता पछि मात्र परिणामहरू प्राप्त हुनेछन् र तिनीहरू अपेक्षा भन्दा कम छन्। तपाइँका साझेदारहरूसँग विवाद हुन सक्छ।
सिंह: आम्दानीको नयाँ स्रोत बन्नेछन्।
सिंहको सातौं भागमा मंगल प्रवेश गर्नेछ । मंगलको स्वरुपमा आएको परिवर्तन तपाईंको लागि लागि धेरै फलदायक साबित हुनेछ। आम्दानीको नयाँ स्रोतहरू सिर्जना हुनेछन् । प्रतियोगितामा सहभागी हुनेहरुका लागी सफलता हात पर्नेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान मिल्नेछ ।
कन्या: सम्बन्धमा खटपट देखा पर्न सक्छ ।
मंगल तपाईंको राशिको साथमा पाँचौं भागमा प्रवेश गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा,तपाईंको प्रेम सम्बन्ध बिचमा पारपाचुके हुन सक्छ । यो समयमा व्यय अधिक हुने र आय कम हुनेछ । टाढाको यात्रा तय नगर्दा राम्रो हुन्छ। तपाईंको प्रतिस्पर्धी सँग सामान्य विवाद हुन सक्छ।
तुला: आर्थिक अवस्था प्रभावित हुनेछ ।
तपाईंको राशिको चौथो भागमा मंगल घुमिरहेको छ । यो तपाईंको लागि खुशीको कुरा हो । यो समयमा, तपाईंको आर्थिक अवस्थामा फेरबदल आउन सक्छ र तपाईंलाई यसको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । कसैलाई अपशब्द बोल्न नदिनुहोस्। वैवाहिक सम्बन्धमा तनाब उत्पन हुन सक्छ।
वृश्चिक: व्यापारीहरूले लाभ उठाउने छन् ।
तपाइँ सँग स्वामी भएको हुनाले मंगलले तपाईंलाई हानी गर्ने छैन । तपाईंको तेस्रो भागमा मंगल प्रवेश गर्नेछ । यो अवस्थामा तपाइँको राम्रो परिणाम आउन सक्छ । व्यापारीहरूले लाभ उठाउन सक्छन् । प्रेम सम्बन्धहरू मा पनि सुधार हुनेछ र मानिसहरू आफ्नो शासन स्थापित गर्न सफल हुनेछन्।
मकर: वित्तीय संकट सामना गर्नु पर्नेछ ।
मंगल तपाईंको राशिको दोस्रो भागमा प्रवेश गर्दैछ । यो अवस्थामा, तपाईंले वित्तीय संकट सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि सामान्य अवरोध खडा हुन सक्छ।
मकर: रिसलाई नियन्त्रण मा राख्नुहोस् ।
मंगल तपाईंको राशिमा पहिलो भागमा प्रवेश गर्दैछ। तपाईंले आफ्नो क्रोध नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। यस समयमा तपाईलाई अझ राम्रो हुनेछ यदि तपाई आफैले आफैंलाई आफ्नो कामको लागी निर्भर गराउनु हुन्छ । मानसिक रूप देखि दुखित नहुनुहोस् । तपाईं आफ्नो निर्णय आफैले लिनुहोस्। दाम्पत्य जीवनमा तनाव पनि आउन सक्छ।
कुम्भ: पैसा बर्बाद हुन सक्छ ।
मंगल तपाईंको राशिबाट १२ औं स्थानमा पार गर्दैछ। यो अवस्थामा तपाईंको अनावश्यक पैसा खर्च हुन सक्छ। यद्यपी, विदेशीको काममा भने सफलता मिल्न सक्छ । तपाइँको काममा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ ।
मीन: भाग्यको साथ रहनेछ !
तपाईंको राशि चक्रमार्फत तपाईंको ११ औं स्थानमा प्रवेश गर्दैछ । यो तपाईंको लागि फाइदाजनक हुन्छ । यो अवस्थामा,तपाईंले सोच्नुभएको काम पूरा हुनेछन्। भाग्य तपाईंको साथमा छ र लामो समय देखि थन्किएको काम बन्ने योग छ । यो समयमा गरिएको भ्रमण फलदायी हुनेछ ।